Request TCS isiZulu
SARS Home > Client Segments > Individuals > Manage your Tax Compliance Status > Request TCS isiZulu
UNGASINXUSA KANJANI ISIMO SAKHO SENTOBELO-NTELA
Ungasicela iSimo Sentobelo-Ntela (TCS) ngenhloso ethile (isib. amaThenda)
kwi-inthanethi nge-eFilling; kumbe
Ungasicela kanjani esakho Isimo Sentobelo-Ntela kwi-eFiling.
Uma ususibonile isimo sakho “iMy Compliance Profile”, usunganxusa Isimo Sentobelo-Ntela kanje :
Ngokuqoka ikhethelo le-Tax Compliance Status Request kanye nohlobo lwe-TCS ofuna ukulucela. Uzokuba nala makhethelo alandelayo:
Igunya Lotshalomali Ezizweni -iFIA (umuntu ngesingayo)
Gcwalisa Isicelo seSimo Sentobelo-ntela bese usithumela kwa-SARS
Isu-ngqangi: Amaphepha asekelayo mawahambisane nesicelo uma kufakwa isicelo se-FIA kanye nesicelo Sofuduko ngeminye imininingwane mayelana namaphepha okusekela adingekayo.
Uma isicelo sakho sesigunyaziwe ngu-SARS, uzonikwa isimo sakho sentobelo-ntela esiphelele kanye neNombolomfihlo. Unganxusa ukuba iNombolomfihlo bakuthumelele yona nge-SMS futhi ungayibona esichayweni sika“TAX Compliance Status Request” esikwiphrofayili yakho kwi-eFiling. INombolomfihlo ungayishicilela isesimweni sokuba yincwadi yemiphumelo yentobelo-ntela.
Isu-ngqangi: Kuzokhishwa iNombolomfihlo ekhethekile eqondene nesicelo ngasinye osifakile
Nangaphezu kweNombolomfihlo, uzokwazi ukushicilela Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela (i-TCC), sisesimweni okuyiso ngaleso sikhathi, ngekhompyutha ngokuthi ucindezele lapho kulotshwe “Print TCC”.
Ukunxusa Isimo Sentobelo-Ntela egatsheni lakwa-SARS
Uma unxusa Isimo SeNtobelo-Ntela sakho egatsheni lakwa-SARS futhi isicelo sakho sigunyazwa, ISimo lesi sizobandakanya neNombolomfihlo nengathunyelwa kuwe nge-SMS enambeni kamakhalekhukhwini ebhalisiwe nabanayo abakwa-SARS emininingwaneni yakho kumbe bayithumele nge-imeyili, noma izoshicilelwe egatsheni uma kunesidingo.
Usinxusa kanjani Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela (i-TCC) egatsheni lakwa-SARS
Uzokwazi ukunxusa i-TCC egatsheni lakwa-SARS ngokugcwalisa Isicelo Sesimo seNtontobelo-Ntela saleyo TCC oyidingayo, njengeyeThenda, Ubumsulwa, i-FIA noma Ufuduko. Uma isimo sakho sentobelo-ntela sikhomba ukuthi uyathoba, ongumsebenzi wakwa-SARS uzokwazi ukukushicilelela noma akuthumelele nge-imeyili i-TCC ekhelini u-SARS analo elibhaliswe ngaphansi kwemininingwane yakho.
Qaphela: Uma isimo sakho sentobelo-ntela sikhomba ukuthi kawuyithobeli imigomo yentela, awuzukwazi ukushicilela i-TCC kwi-Inthanethi kumbe uthole ikhophi ye-TCC egatsheni lakwa-SARS kuze kube uyasilungisa isimo sakho sokuthobela imigomo yentela.
Inombolomfihlo Yesimo Sentobelo-Ntela
Uma usumnikile osebenzisana naye iNombolomfihlo, izokube isinika leyo nhlangano noma umnyango kahulumeni ithuba lokubuka isimo sentobelo-ntela sakho kwi-inthenethi. Izokubanika isimo sakho sentobelo-ntela sangalolo suku nesikhathi abazobe bebheka ngaso kungabi ngukuveza usuku okwakhishwa ngalo inombolomfihlo. Ukuze kuvikelwe ingasese lomkhokhintela, akuzukuvezwa eminye imininingwane. Qaphela ukuthi akuyizo zonke izikhungo zikahulumeni noma izinhlangano ezizimele ezizokwazi ukusebenzisa leNombolomfihlo yeNtobelo-Ntela okwamanje, ezimweni ezinjalo, kufanele ukhiphe i-TCC eshicilelwe. Kusingwa ukuthi kuzohamba iNombolomfihlo emva kwesikhathi ithathe indawo ye-TCC eyiphepha.
Ngeminye imininingwane sicela ubheke ku-“Umhlahlandlela weSimo Sentobela Ntela kwi-e-Filing”.
Shayela kwi- SARS Contact Centre ku- 0800 00 SARS (7277) kumbe uvakashele igatsha lakwa- SARS eliseduze nawe.
Last Updated: 02/06/2016 2:54 PM ​